युद्धले जन्माएको एसओएस स्कुल
हर्मन माइनस स्कुल भक्तपुर । तस्वीर - सुशील श्रेष्ठ
कसैका आमा छैनन्, कसैका बुबा । कतिलाई त कसको कोखबाट जन्मिएँ भन्नेसमेत थाहा छैन । कोही प्राकृतिक विपत्‌मा परेका त कोही घरेलु हिंसाको सिकारमा । कोही द्वन्द्वले लखेटिएकाहरू । फरक–फरक भोगाइ तर पीडा भने उस्तै ।
एसओएस बालग्राम सानो ठिमीको बगैँचामा फुलेका थरीथरीका फूल । वरिपरि छन् १६ वटा घर । कुनै घरमा आठ, कुनैमा नौ त कुनै घरमा १० जनाको परिवार बस्छन् ।
प्रत्येक घरमा एक आमा र आन्टी छन् । आमा र आन्टीले १० जना छोराछोरीलाई हुर्काउँदै छिन् । त्यसो त ती बालबालिका त्यही घरमा जन्मिएका भने होइनन् । जसले कर्म दिइरहेकी छन्, उनले जन्माएको पनि होइन । हुन त प्रत्येक महिला आमा बनून् या नबनून् तर बालबालिका हुर्काउन सक्ने क्षमता राख्छिन् भन्ने यो दरिलो उदाहरण हो । यो मान्यतालाई अगाडि सारेको छ एसोएस बालग्रामले ।
एउटै घरमा फक्रिरहेका कलिला बालबालिकाहरूलाई कसले के भोगेर आएको होे भन्ने पनि थाहा छैन । न जात, न धर्म, न वर्ग थाहा छ । उनीहरूलाई यति थाहा छ ‘सिस्टर एन्ड ब्रदर’ । निस्फिक्री पाएका छन् आमा र आन्टीको माया । अनि आत्मीय छन् १ सय ६२ जना दाजुभाइ दिदीबहिनी । यिनै बालबालिकालाई पढाउनका लागि स्कुलको स्थापना गरिएको हो ।
बूढानीलकण्ठ स्कुल, जहाँ छिर्नुअघि विद्यार्थीले भुल्नैपर्छ आफ्नो थर
बालग्रामका बालबालिका स्कुल जाँदै ।
एसओएस हर्मन माइनर स्कुल कसरी जन्मियो भनेर जान्न दोस्रो विश्वयुद्धमा फर्किनुपर्ने हुन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धले धेरै बालबालिका गुमायो । कति बालबालिका टुहुरा बने । बिचल्लीमा परेका बालबालिका सडकमा आउन विवश भए । सडकमा बालबालिकाको कारुणिक दृश्य देखेपछि अस्ट्रियाका डा. हर्मन माइनरको मन द्रवीभूत भयो ।
सडकमा आएका बालबालिकाको संरक्षण कसरी गर्ने त ? माइनरले निष्कर्ष निकाले– एसओएस चिल्ड्रेन्स भिलेजेज एसोसिएसन’ खोल्ने ।
अन्तत : उनले सन् १९४९ मा एसओएसको जग बसाले । माइनरको कामले विश्वभर चर्चा पायो । अनि एसओएस अस्ट्रियामा मात्र सीमित रहन सकेन । युरोप, अमेरिका, अफ्रिकामा पनि एसओएसको स्थापना भयो ।
एसओएस बालग्राम, सानो ठिमी भक्तपुर ।
सन् १९६८ मा माइनर नेपाल आएका थिए । नेपालमा पनि असहाय बालबालिकाबारे उनले बुझ्न र देख्न पाए । माइनरको नेपाल भ्रमणपछि बालबालिकाको संरक्षण गर्न सन् १९७२ मा सानो ठिमी भक्तपुरमा तत्कालीन अधिराजकुमारी शारदा राज्यलक्ष्मीदेवी शाहको अध्यक्षतामा एसओएस बालग्राम नेपालको स्थापना गरियो ।
‘सुरुमा १३ वटा घरबाट सुरु गरिएको हो । प्रत्येक घरमा दुःख पाएका असहाय चार/पाँच जना बालबालिका राखिएको थियो’, बालग्रामकी सहायक निर्देशक ज्योत्सना क्षत्री भन्छिन्, ‘नेपालको पहिलो एसओएस स्थापना भएको ठाउँ यही हो । अहिले १० ठाउँमा विस्तार भएको छ ।’
ती बालबालिकालाई शिक्षासँगै समाजमा स्थापित गराउनु पनि एसओएसको दायित्व हो । ‘सही बालबालिकाले संरक्षण पाउनुपर्छ’, क्षत्री भन्छिन्, ‘बुबाआमा बिते पनि अरु नातेदारले बालबालिका राख्न सक्छन् । बालबालिकालाई समुदायसँग नै घुलमिल गराउनुपर्छ ।’
१४ वर्षसम्म बालबालिका बालग्राममा बस्छन् भने एसईईपछि २३ वर्षसम्म समुदायमा घुलमिल गराइसक्ने उनी बताउँछिन् । ‘एसईईपछि युवालयमा जाने र समुदायमा गएर काम गर्न योग्य बनाइन्छ’, उनी भन्छिन्, ‘अभिभावकत्व भने बालग्रामले सधैँ लिइरहन्छ ।’
बालग्राममा दाजुभाइ दिदीबहिनीको सम्बन्ध हुने भएकाले बिहेवारी चल्दैन । ‘बालग्रामबाहिरका समुदायकासँग भने विवाह गर्न मिल्छ । बालग्रामले नै अभिभावकत्व निर्वाह गरेर विवाह गर्दिन्छ’, उनी भन्छिन् ।
बालग्रामकी आमा छोरीलाई स्कुल पठाउँदै ।
अनि जन्मियो हर्मन माइनर स्कुल
बालग्राममा रहेका बालबालिकाका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण थियो । उनीहरूलाई राम्रो शिक्षा दियो भने भोलि आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्छन् भनेर बालग्रामअन्तर्गत हर्मन माइनर स्कुल नेपालमा सन् १९७३ मा स्थापना गरिएको हो । हाल नेपालमा सातवटा हर्मन माइनर विद्यालय खोलिएको छ ।
‘सुरुमा ३ कक्षासम्म थियो । ७५ जना विद्यार्थी र तीन जना शिक्षक थिए’, ३२ वर्ष स्कुलको नेतृत्व सम्हालेका पूर्वप्रधानाध्यापक शंकर पौडेल भन्छन्, ‘अहिले १२ कक्षासम्म पुगेको छ ।’
कोहीले सरकारी, कोहीले निजी, कोहीले विदेशी स्कुल भन्छन् । सुरुवाती चरणमा सरकारले स्कुल स्थापना गरेर शिक्षक पनि दिएको थियो । पछि सरकारी शिक्षक रिटायर्ड हुँदै गएपछि थप सरकारी शिक्षक एसओएसले लिएन । हाल कक्षा ८ सम्म सरकारी र त्योभन्दा माथि संस्थागत गुठीमा राखिएको छ ।
‘अहिले एक जना शिक्षक सरकारी हुनुहुन्छ । एक जनाका लागि सरकारले तलब दिने हो’, प्रधानाध्यापक रञ्जना बजगाईँ भन्छिन्, ‘सरकारी शिक्षक हिजोआज राख्ने गरेको छैन ।’
सुरुका दिनमा धनीमानीले यो स्कुलमा पढाउने गरेका थिएनन् । अनाथ बालबालिका पढ्ने भएकाले हेयको भावले हेरिन्थ्यो । ‘अनाथ र गरिबले मात्र पढ्ने भन्ने भ्रम थियो । सुरुमा बालग्रामका बालबालिका र धनीको घरमा काम गर्ने बालबालिका पढ्न आउँथे’, पुराना दिन सम्झँदै पूर्वप्रधानाध्यापक पौडेल भन्छन्, ‘नतिजा राम्रो हुँदै गएपछि सबैको नजर पर्न थालेको हो ।’
सोच बदलिएको छ, हिजोआज कतिलाई लाग्छ– यो त धनीका छोराछोरीले पढ्ने हो ।
हर्मन माइनर स्कुल ।
२०४८ सालमा एसओएसबाट पहिलो पटक विद्यार्थी एसएलसीमा सहभागी भएका थिए । २७ जना विद्यार्थी परीक्षामा सामेल भएकोमा २२ जना पहिलो श्रेणीमा र अरु दोस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका थिए । ‘नतिजा राम्रो भएपछि विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रधानमन्त्रीसम्मले फोन गर्थे’, पौडेल आफ्नो अनुभव सुनाउँछन्, ‘भर्नाको समयमा एक महिना त फोन नै अफ गर्नुपर्ने स्थिति आउँथ्यो ।’ हर्मन माइनर स्कुलले उत्कृष्ट विद्यालयको अवार्डसमेत हात पारेको छ ।
संस्थागत विद्यालयतर्फ उत्कृष्ट विद्यालय ।
कस्ता–कस्ता विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन् ?
पहिलो प्राथमिकतामा एसओएस बालग्राममा संरक्षित बालबाबालिकाले पढ्न पाउँछन् । पूर्ण रूपमा अभिभावक नभएका, एकल अभिभावक भएका, अति विपन्न, रोगबाट ग्रसित भएका अभिभावकका बालबालिका, विपत्तिमा परेका बालबालिकाले पनि हर्मन माइनरमा पढ्न पाउँछन् । ‘दुःखमा परेका बालबालिका आएनन् भने अरुले पाउने हो’, प्रधानाध्यापक बजगाईँ भन्छिन्, ‘बालग्रामका बालबालिका अनेक दुःख भोगेर आएका हुन्छन् । ती बालबालिकालाई समाजसँग जोड्न नर्मल परिवारको बच्चा पनि भर्ना लिन्छौँ ।’
सीमित सिट हुने भएकाले असहाय बालबालिका नआए मात्र नर्मल परिवारको बच्चाले सो स्कुलमा पढ्न पाउने हो । ‘असहाय बालबालिकाको पनि इन्ट्रान्स परीक्षा हुन्छ । तर, पहिलो प्राथमिकतामा उनीहरू पर्छन् । असहाय बालबालिका नआए मात्र समुदायबाट आउने बालबालिकालाई मेरिटका आधारमा भर्ना लिन्छौँ’, उनी भन्छिन् ।
पुस्तकालयमा पढ्दै विद्यार्थी ।
पहिलो खुट्किलो नर्सरी
हर्मन माइनर स्कुलको पहिलो खुट्किलो नर्सरी हो । नर्सरीमा ३८ जनाको कोटा हुन्छ । ‘नर्सरीमा भर्ना लिएपछि अपग्रेड हुँदै जाने हो । ६ कक्षामा ३०/३२ जना थप हुन्छ’, प्रधानाध्यापक बजगाईँ भन्छिन्, ‘७ कक्षामा १० जना जति विद्यार्थी थपिन्छ । अर्को ११ कक्षामा मात्र भर्ना खुल्छ ।’ १२ कक्षासम्म पढाइ हुने यो स्कुलमा हाल १ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
स्कुल आउँदै बालबालिका ।
आफ्नै स्रोतबाट चलाउनुपर्ने
स्कुल पहिले एसओएसले नै पूर्ण रूपमा चलाएको थियो । तर, हाल आफ्नै स्रोतमा चलाउनुपर्ने बाध्यता स्कुललाई परेको छ ।
‘शिक्षा र स्वास्थ्य मानिसको आधारभूत अधिकार भएको छ । अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यबाट नागरिक वञ्चित हुने अवस्था छैन । त्यसैले एसओएसले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी नगर्ने भएको हो’, उनी भन्छिन्, ‘विद्यालय कि बन्द गर्नुपर्ने कि आफैँ चलाउनुपर्ने भयो । चलाउनका लागि शुल्क लिन बाध्य भएका हौँ ।’
बालग्राममा रहेका बालबालिकाले निःशुल्क पढ्न पाउँछन् । उनीहरूको सम्पूर्ण खर्च बालग्रामले नै व्यहोरेको हुन्छ । समुदायबाट आएका नर्मल परिवारले पनि शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
आवासीय विद्यालय होइन
धेरैलाई माइनर स्कुल आवासीय भन्ने छ तर त्यस्तो होइन । ‘समुदायबाट आएका बालबालिका बिहान आएर दिउँसो घर जाने हो’, उनी भन्छिन्, ‘बालग्राममा आश्रितलाई आवासीय भन्न मिल्दैन । उनीहरूको पनि त्यो घर नै हो ।’
बालग्रामले पनि सरकारी पाठ्यक्रमबाट नै शिक्षण सिकाइ गर्ने गरेको छ । ‘राज्यको नीतिलाई मान्ने हो । कोर्स बुक जसले उत्पादन गरेको भए पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृति दिएकालाई फलो गर्छौंं’, उनी भन्छिन्, ‘विद्यार्थीलाई प्रेसर दिएर पढाउने गरेका छैनौँ । विद्यार्थीको चाहनाअनुसार पढाउने हो ।’ यस विद्यालयमा योग्य शिक्षक र गुणस्तरीय पाठ्यसामग्रीले नै पढाइ अब्बल भएको प्रधानाध्यापक बजगाईँको बुझाइ छ ।
प्रधानाध्यापक रञ्जना बजगाईँ, सहप्राचार्य शिवप्रसाद पौडेल र दुर्गबहादुर आले ।
हर्मन माइनर स्कुलमा शिक्षक–शिक्षिकाको छनोट पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हुने गरेको छ । ‘न्यूनतम योग्यता स्नातक हो । शिक्षक–शिक्षिकाले पढाएको विद्यार्थीले बुझे बुझेनन्, त्यो पनि हेरेर छनोट हुन्छ’, उनी भन्छिन्, ‘एक जना शिक्षकको तलब सरकारबाट आउँछ । अरु सबैको तलब सुविधा स्कुलले नै ब्यहोरेको छ ।’ यहाँ पढाउने शिक्षक–शिक्षिकाका दुई जना बालबालिकाले भने निःशुल्क पढ्न पाउने व्यवस्था छ ।
देशमै बसेर सेवा गर्ने जनशक्ति उत्पादनमा स्कुलको जोड छ । ‘यहाँ पढेका धेरै विद्यार्थी नेपालमै बसेर काम गरेका छन् । कति विदेश पनि गएका छन् । देशका लागि केही गरून् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो’, प्रधानाध्यापक बजगाईँ भन्छिन् ।
ल्याबमा विद्यार्थीलाई सिकाउँदै शिक्षक ।
स्कुलमा खेल्दै बालबालिका ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २५, २०७७, १९:५५:००